Garbahaarey: Qisaas lagu fuliyay nin horey kufsi u geystay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Jubaland / Garbahaarey: Qisaas lagu fuliyay nin horey kufsi u geystay
Garbahaarey: Qisaas lagu fuliyay nin horey kufsi u geystay
March 5, 2019 - By: Mohamed Jeenyo
Waxaa maxkamada ku taala magaalada Garbahaareey ee gobolka gedo ay maanta dil toogasho ah ku fulisay nin la sheegay in uu kufsi iyo dil u geystay gabar kamid ahayd dadka deegaanka.
Maxamuud Cali Xaamud oo ah ninka kufsiga iyo dilka geystay ayaa maalmo ka hor lasoo taagay Maxkamad ku taala Garbahaarey iyadoona cadeymo iyo marqaatiyaal kadib ay xeer ilaalinta maxkamadu ku xukuntay dil toogasho ah.
Ninkan kufsiga geystay ayaa maanta lagu toogtay fagaare ku yaala degmada Garbahaareey ee gobolka Gedo sid ay sheegeen masuuliyiinta Maxkamadda gobolka Gedo.
Maxamuud Cali Xaamud ayaa da’diisa lagu sheegay 32 sano jir waxaana inta aan lagu fulin xukunka dilk ah uu maxkamadda ka hor qirtay dambiga ah in uu kufsi iyo dil isugu daray gabar kamid ahayd dadka deegaanka.
Si kastaba xukunka ay Maxkamadda Garbahaareey ku fulisay ninkan la sheegay in uu kufsiga iyo dilka geystay ayaa hadal heyn ku abuurtay bulshada dhexdeeda xili aad loo hadal hayo kiisas noocan oo kale ah oo dhawaan ka dhacay magaalooyin kamid ah dalka.